MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA KARELIAN BEAR - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Karelian Bear
'Harley waa sawirka kaamil ah KBD. Firfircooni, ciyaar, madadaalo jecel laakiin ha qaldamin tani waa Ey Bear ah oo ku nool magaciisa ilaa 110%, marka laga hadlayo xayawaannada yaryar, dabagalayaasha, bakaylaha, bisadaha, iwm, iwm. wuxuu dareemayaa sida 200lbs, markaad iskudayeyso inaad isaga celiso. Muuqaalka kaliya ee eeyaha Kaarlian Bear ee aan waligood wax laga qaban, waa jacaylka ay u qabaan biyaha ama ugu yaraan Harley. Isagu waa eeygii ugu biyaha badnaa ee aan abid arko, isagoo saacado ku qaatay wabiyada iyo harooyinka waana uu jecel yahay doonta iyo kalluumeysiga. Waxaa naloo sheegay inuu yahay kan ugu fiican, eeyaha xun ee ay weligood la kulmaan. Ka dib laba kalfadhi oo adeecid ah, iyo 3 saacadood oo socod ah maalintii, roob ama iftiin, jawiga ugu fiican ama ugu cimri dheer, Harley waxay si fudud ula qabsatay nolosha magaalada. Lagu kalsoon yahay dadka, iyo carruurta, waa nin jilicsan oo ilaaliya seerayaasha eeyaha. Si dhakhso leh ayuu wax u bartaa, badanaana wuxuu ka fakaraa jidkiisa xaalado badan. Xaaskeyga Shannon iyo aniga ma ka fikiri karno saaxiib noo fiican.
Karelian eyga orso
Eyga Karelian Bear wuxuu leeyahay dhago yaryar oo qufulan oo si yar kor ugu tilmaama. Waxay kuxiran yihiin dhogor cufan, yaraynta halista barafka. Jaakad dhan-cimilada gaagaaban waxay ka kooban tahay timo toosan, madax adag halka lakabka hoostiisa uu yahay mid jilicsan oo cufan. Bawdyaha waxaa ku daboolan timo qaro weyn. Sida 'Russo-European Laika', noocyadu waxay leeyihiin jaakad madow iyo caddaan ah, taas oo aan caadi u ahayn eeyaha waqooyiga Spitz. Midab naxaas ah ayaa caadi ah. Tilmaamo madow oo cadaan ah ayaa loo arkaa qalad. Eeygu waa inuu ahaadaa mid madow marka hore leh calaamado cad, oo kala duwan oo ka dhaca madaxa, qoorta, laabta, caloosha iyo lugaha. Daamanku aad ayey u awood badan yihiin. Dabada ayaa dheer. Indhaha yar yar waxay muujinayaan feejignaan xoog leh. Dabada ayaa gadaal u rogmaysa dhabarka sida caadiga ah ee loo yaqaan 'Spitz arch'. Si xoog leh loo dhisay, lafo wanaagsan oo dhex dhexaad ah, Eyga Karelian Bear waxyar buu ka dheer yahay dhererkiisa. Madaxa ayaa loo qaabeeyey sidii buudhadh af leh. Jidhku waa adag yahay dhabarkuna si wanaagsan ayuu u horumaray.
Eyga Karelian Bear wuxuu leeyahay dareen wanaagsan oo kaftan ah. Waa mid xasaasi ah, madaxbannaan, caqli badan, karti badan, iskeedna u adag oo firfircoon. Ey adag, isdaba joog ah, oo awood leh, wuxuu diyaar u yahay inuu qaato xayawaan kasta oo xayawaan ah. Eygu waa mid aad daacad ugu ah qoyska milkiilahiisa wuxuuna sameeyaa wehel wanaagsan oo reerka marka uu leeyahay milkiileyaal yaqaan sida loo sameeyo hogaan muuji Eyguna waa tababaro badan . Tani ma aha nooc ka mid ah milkiilaha xayawaanka aan caadiga ahayn ee Karelian Bear Dog waa ugaarsade geesinnimo iyo go'aan adag. Waxay culeys saaridoontaa orso duulimaad ama ku weerari doonta xasilooni darro weyn. Qofka runta jecel ee jecel banaanka iyo ugaarsade u heellan ayaa u eegi karaya noocyadan shaqada badan farxad iyo qanacsanaan buuxda. Milkiileyaashu waa inay karti u yeeshaan wax ka qabashada cannahan xoogga badan. Milkiil fahmay dhaqanka canine , sida loo isgaadhsiin by muujinta awoodda eyga, tababar habboon iyo is dhexgalka bulshada waa musts buuxda. Waxaa laga yaabaa inay isku daydo xukuma eeyaha kale oo si buuxda u diyaar u ah inuu la dagaallamo. Milkiilayaashu waa inay la xiriiraan tani maahan dhaqan la aqbali karo. Eygan wuxuu u baahan yahay ilaaliye awood dabiici ah leh. Tababarku waa inuu noqdaa mid iswaafajinaya gacan adag iyo kalgacal labadaba. Tani ma aha nooc ay leeyihiin milkiilayaasha eyda aan khibradda lahayn. Waxay jecel yihiin dadka waxayna ku dhawaaqi doonaan soo dhaweyn iyo soo dhaweyn aan la soo dhaweyn labadaba. Soo booqdayaasha eygu sifiican u garanayo waxay helayaan soo dhaweyn xamaasad leh halka shisheeyaha laga yaabo in si qabow loola dhaqmo. Noocani waa mid aad u ilaaliya. Waxay kugu ilaalin doonaan noloshooda. Eyga Karelian Bear wuxuu la noolaan karaa xayawaannada kale ee guryaha haddii ay ogaadaan halka ay ku yaalliin xirmadooda (kuwa kale oo dhan ka hooseeya) iyo haddii tababarka iyo is dhexgalka bulshada si habboon loo maareeyo. Noocani wuxuu leeyahay rabitaan yar oo cabirkiisa ah.
toy adhijir Australia Merle buluug
Dhererka: 19 - 23 inji (48 - 58 cm)
Miisaanka: 44 - 50 rodol (20 - 23 kg)
Tani waa nooc caafimaad oo caafimaad qaba.
Dog Karelian Bear laguma talinayo nolosha guriga. Waa inay lahaataa acreage ama beer si ay u socoto. Xayawaankani ma jecla in la xayiro. Waxaa lagu hayn karaa qolka bannaanka illaa iyo inta ay helayaan fursado badan oo ay ku ordaan.
St.bernard bernese buuq isku dhaf ah
Eyga Karelian Bear waa eey aad u firfircoon. Waa in si jimicsi leh loogu jimicsado socod ugu yaraan saacad maalin kasta. Haddii aad si fiican u maamuli karto eeygan, wuxuu ku raaxeysan doonaa jimicsi adigoo ku ordaya baaskiil. Haddii aysan helin jimicsi ku filan way caajisi doontaa waana laga yaabaa wax ku burburin kara guriga gudihiisa . Waligaa ha u oggolaan laba Eey oo ah Barelian Bear inay si wada jir ah u wada ordaan-waayo iyagu ugaarsi bay geli doonaan Hubso in daaraddaadu si fiican u deyrsan tahay si Eygaaga Karelian Bear Doc uusan uga bixin duulimaad ugaarsi ah.
Dharka cimilada oo dhan way fududahay in la daryeelo, oo u baahan fiiro yar. Isticmaal shanlo bir ah marka eygu daadinaayo si sahlan timaha lumay looga soo saaro jaakadda hoose. Sida eeyaha kale ee Arctic, Karelian Bear Dog malahan ur eyga. Noocani waa celcelis daadiya.
Aagga mar loo yaqaan Karelia ee woqooyiga Yurub ayaa had iyo jeer waxaa ku nool hareero adag oo ugaarsi ugaarsi ah. Muddo dheer, eeyo la mid ah ayaa lagu kariyey Karelia si ay ugaarsadaan ugaadh ballaaran. Eeyadan ayaa la ogaa inay raaceen dadkii ugu horreeyay ee degay Finland kumanaan sano ka hor. Qabiilooyinkan hore ee dadku waxay ku badbaadeen wixii ay ugaarsan jireen, waana taas sababta eyda adag, geesinimada leh oo adag ee waxka qabashada orso, yeyda iyo lynx ay muhiim u ahaayeen. Eyga Karelian Bear wuxuu si aad ah ugu eg yahay Ruska-European Laika. Waxay u xuubsiibatay qaybtii Finland ee uu sheeganayay Midowgii Soofiyeeti horaantii qarnigii 20-aad. Eyga Karelian Bear, oo aad uga tiro badan waddankiisa marka loo eego mid kasta oo ka mid ah Laikas-ka Ruushka, waxaa adeegsada ugaarsadayaasha digaagga ee ku baahsan Finland, Sweden iyo Norway. Waxaa markii ugu horreysay lagu soo bandhigay carwada eyga ee Helsinki sanadkii 1936, laakiin Dagaalkii Labaad ee Adduunka ka dib isirku wuxuu ku dhowaaday inuu noqdo bakhtiyey . Dhamaan Kareeliyiinta casriga ah waxaa dib loogu raadiyaa afartan ey oo la helay lana badbaadiyey dagaalka kadib. Eyga Karelian Bear wuxuu caan ku ahaa bilowgii qarnigii markii laga heli karay tiro aad u tiro badan. Tiradeedu hoos ayey u dhacday 1960s, laakiin caannimadiisa ayaa sare u sii kacaysay oo hadda waxaa lagu beerlaxawsadaa Waqooyiga Ameerika iyo dalal badan oo Yurub ah. Ciyaartan ugaadhsadaha aadka u jecel waxaa ka mid ah bahalka, ugaadha duurjoogta, bakaylaha iyo mooska. Isagu sidoo kale waa baqdin ku filan inuu la dagaalamo yeyda iyo orsada sidaas darteedna wuxuu u shaqeeyay sidii difaac isagoo ugaarsanaya xayawaanadan duurjoogta ah. Waddanka uu ka soo jeedo ee Finland, eyga ayaa inta badan loo isticmaalaa elk waana eeyga la jecel yahay ee ugaarsadayaasha waaweyn ee ugaarsiga ah.
McKinley Karelian Bear eey hal sano jir ah
Zeus the Karelian Bear Dog oo jira 10 bilood
shaybaarka jarmalka isku-darka tilmaamaha gaagaaban
Eygayga Zeus ee 10 bilood jira — dabeecad qumman, dhaqdhaqaaq weyn, qaab dhismeed qurux badan wuxuu nolosheenna ka dhigayaa mid farxad ka buuxda. Nooc aad u weyn ayaa hoos loo dhigay, laakiin wuu isbeddeli doonaa. '
Kan Raadinta Miss Moneypenny aka Vista
Karelian Bear Dogs, Bayka iyo Vista
Rio ee Eey Bear Karelian ah
papillon king charles isku dhafka spaniel
Lora Karelian Bear Dog oo jira 1 sano
McKinley the Karelian Bear Dog oo ah eey yar oo jirta 3 bilood isagoo xiran koofiyad Santa— 'Isagu waa mid ciyaar badan, xanaaq badan oo aad u xiiso badan.'
McKinley Karelian Bear Dog oo ah eey yar oo jirta 5 bilood
Eeg tusaalooyin dheeraad ah ee Karelian Bear Dog
Sawirada Eyga Karelian Bear 1
xoola dhaqatada australia collie mix dabeecada
Eey dibi iyo qas qas
midabada Cocker ingiriisiga spaniel madow
2 bilood jir retriever
imisa ayey cabiraan bulldogs faransiis
sawirada iskudhafka rhodesian ridgeback
shetland sheepdog australia adhijir isku dhafan